कस्ता प्रयोगकर्ताले पाउँछन् टेलिकमको ई-सिम? यस्ता छन् फाइदा! - Khabar Center
कस्ता प्रयोगकर्ताले पाउँछन् टेलिकमको ई-सिम? यस्ता छन् फाइदा!
अब नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई ई-सिम उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि आइतबार (२०७९ बैशाख ११ गते) नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र मोन्टी युके ग्लोबलको स्थानीय प्रतिनिधि अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्द बीच सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार मोन्टी युके ग्लोबलले नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुलाई ई–सिम सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने छ ।
सो अवसरमा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले नेपाल टेलिकमले नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा ई–सिम समेत उपलब्ध गराउने भएको र यसका लागि आवश्यक काम छिट्टै नै सुरु हुने बताइन्।
अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्दले ई–सिमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य समयमै सम्पन्न गरी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
के हो ई-सिम ?
ई–सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात इलेक्ट्रोनिक सिम हो । ई–सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रुपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता पर्दैन । यसका लागि ई–सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट आवश्यक हुन्छ । यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ । ई–सिम प्रयोगमा आए पश्चात सिमकार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
मोबाइल सेटबाहेक ई–सिमलाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्ट वाच र शरीरमा पहिरिन योग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइस हरुमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हालका सबै प्रयोगकर्ताले समेत ई–सिम प्रयोग गर्न सक्ने छन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले समेत ई–सिम लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति :बैशाख १५ २०७९ बिहिवार - १२:५४:३७ बजे
इन्टरनेट सेवा नरोकिने, सरकार र संघबीच जुट्यो यस्तो सहमति
पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट र टेलिभिजन कम्पनीको तार काट्ने प्राधिकरणले दियो यस्तो चेतावनी
आजदेखि नेपाल टेलिकमको ‘स्प्रिङ अफर’, यस्ता छन् विशेषता
दराजको नयाँ वर्ष विशेष: नयाँ रहर नयाँ अफर